Soro Mmemme Mgbakwunye Fyrebox
Anyị na-enye 30% ọrụ na-emegharị ugboro ugboro maka ahịa niile emere, maka ndụ onye ahịa, site na njikọ njikọ mmekọ gị pụrụ iche (dị na ibe akaụntụ gị).
Mmemme Mgbakwunye Fyrebox na-enye ndị otu aka ịkwalite onye na-aza ajụjụ maka obere azụmaahịa. Ihe karịrị 100,000 ndị ahịa ejirila Fyrebox ma ọ dị ugbu a n'asụsụ 39 (anyị ga-eru 50 ruo etiti 2019). Ọnọdụ anyị esitela na ntanetị 500,000 na-eduzi ndị ọrụ anyị na ntinye aka na mma na 100,000s weebụsaịtị.
Kedu ihe kpatara Ekekọrịta Fyrebox na ndị na-ege gị ntị?
Fyrebox na-enye ụzọ dị mfe iji mepụta ajụjụ iji mepụta ndị nkuzi, kuziere ma ọ bụ naanị iji tinye ndị na - ege ntị n'ịntanetị. Ndia bu ihe Fyrebox nwere inye:
Enweghi oke na-eduga na atụmatụ niile a na-akwụ ụgwọ
Ekwentị na-aza ajụjụ
Ngwa mgbakwunye maka Sistemụ Njikwa Ọdịnaya niile
Withmekorita ya na Zapier
Ndị na-eme Subaccounts
A ga-akwụ ụgwọ na akaụntụ Paypal dị n'elu nke abụọ nke ọnwa ọ bụla ma ọ bụrụ na ego ole kọmitii karịrị US $ 25 (ma ọ bụ ihe ha nhata)You nwere ike ịbanye na oge ọrụ gị wee kwụọ ụgwọ ụgwọ ọrụ gị na 2 nke ọnwa ọ bụla ozugbo na akaụntụ paypal gị (na-enye ụgwọ ego gị karịa $ 25)
Otu esi esonye na Mmemme Mgbakwunye Fyrebox
Step #1: Bụrụnụ onye ọrụ Fyrebox ma banye maka Standardkpụrụ Okike. Ndị otu abụghị ihe achọrọ, mana ndị mmekọ jiri Fyrebox na-eme nke ọma karịa. Ọ bụrụ n’ikwere na ị ga-eme nke ọma n’ịkwalite Fyrebox n’ejighi akaụntụ akwụ ụgwọ, biko kpọtụrụ.
Step #2: Gaa na peeji nke akaụntụ gị wee pịa taabụ "Ntughari". Then ga - ahụ uzo ị ga - esoro ndị na - ege gị ntị.
Step #3: Kekọrịta njikọ njikọ gị